တချို့မြန်မာတွေ ဘာဖြစ်လို့ ဘ၀မေ့ပြီး ဘ၀င်မြင့်သွားကြတာလဲ - Myanmar in Singapore
Posted by Admin Team on June 7, 2010 at 5:38pm in Debate ကဏ္ဍများ
Tags: ဒါလေးတွေဖြေကြည့်ပါ Like0members like this
Permalink Reply by Daewer Hein on June 10, 2010 at 11:30pm စကပ်တိုတို ဘောင်းဘီတိုတိုတွေဝတ်ပီး အောက်စလွတ်သွားလားမှမသိတာ...း)
Permalink Reply by သန့်ဇော်မြင့် on June 11, 2010 at 12:18am အရင်အခြေအနေကို ပြန်မတွေးချင် ပြန်မသွားချင်တော့လို့နေမှာပေါ့
Permalink Reply by သန့်ဇော်မြင့် on June 11, 2010 at 12:19am ကျွန်တော်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတော်တော်များများကို မမှတ်မိတော့ဘူး..
Permalink Reply by Crocus on June 11, 2010 at 4:34pm သူတို့တွေ ရဲ့ အတွေးပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်...
Permalink Reply by Daewer Hein on June 11, 2010 at 8:34pm အမှန်ကတော့ လူတိုင်းက ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာမို့၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ဘ၀ ကိုယ်မေ့ချင်မေ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်... တကယ်ခက်နေတာက ဘ၀မေ့တဲ့ ဗမာတွေမဟုတ်ပဲ သူမျာူကိစ္စ သိပ်ဝင်ပါချင်နေတဲ့ ကျန်တဲ့ဗမာတွေပါ... ကျနော်လဲ ဘ၀မေ့တာကို မကြိုက်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ဒါသူ့ဘ၀နဲ့ သူ့ကိစ္စပဲလေ... `ကိုယ်နှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ်မပိုင်၊ ရောဝင်မပါရ´တဲ့...။
Permalink Reply by hela15 on March 31, 2012 at 9:22am I like ur com "... တကယ်ခက်နေတာက ဘ၀မေ့တဲ့ ဗမာတွေမဟုတ်ပဲ သူမျာူကိစ္စ သိပ်ဝင်ပါချင်နေတဲ့ ကျန်တဲ့ဗမာတွေပါ... ကျနော်လဲ ဘ၀မေ့တာကို မကြိုက်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ဒါသူ့ဘ၀နဲ့ သူ့ကိစ္စပဲလေ... `ကိုယ်နှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ်မပိုင်၊ ရောဝင်မပါရ´တဲ့...။
Permalink Reply by mydaydream on June 11, 2010 at 11:03pm absolutely agree ;)
Daewer Hein said:တကယ်ခက်နေတာက ဘ၀မေ့တဲ့ ဗမာတွေမဟုတ်ပဲ သူမျာူကိစ္စ သိပ်ဝင်ပါချင်နေတဲ့ ကျန်တဲ့ဗမာတွေပါ... ကျနော်လဲ ဘ၀မေ့တာကို မကြိုက်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ဒါသူ့ဘ၀နဲ့ သူ့ကိစ္စပဲလေ... `ကိုယ်နှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ်မပိုင်၊ ရောဝင်မပါရ´တဲ့...။
Permalink Reply by Ha Ha on June 13, 2010 at 2:54pm ဆင်းရဲတဲ့သူကချမ်းသာလာရင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Permalink Reply by မောင်သူစင် on June 15, 2010 at 12:20pm အခုကို မင်းကတော်တော်ဝင်ပါနေပြီ။
Daewer Hein said:အမှန်ကတော့ လူတိုင်းက ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာမို့၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ဘ၀ ကိုယ်မေ့ချင်မေ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်... တကယ်ခက်နေတာက ဘ၀မေ့တဲ့ ဗမာတွေမဟုတ်ပဲ သူမျာူကိစ္စ သိပ်ဝင်ပါချင်နေတဲ့ ကျန်တဲ့ဗမာတွေပါ... ကျနော်လဲ ဘ၀မေ့တာကို မကြိုက်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ဒါသူ့ဘ၀နဲ့ သူ့ကိစ္စပဲလေ... `ကိုယ်နှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ်မပိုင်၊ ရောဝင်မပါရ´တဲ့...။
Permalink Reply by zawhtetmaw on June 15, 2010 at 6:04pm သူတို့မေ့ချင်မေ့ပါကိုယ်မမေ့ဘို့ကအရေးကြီးပါတယ်
Permalink Reply by kyaw min oo on May 17, 2011 at 10:19pm ကျွှန်တော် ကတော့ ဒီလို မမြင်မီဘူး ။ ဘယ်မြန်မာ မှ ဘ၀ မမေ့ ပါဘူး ။ ဒီမှာ ရောက်နေတော့ ဒီကလူတွေ ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်အားမလို အားမရ ဖြစ်မီ မှာပါပဲ ။ အဲဒီ ကနေ ဒီရောက်နေတုန်း မှာ ဒီအလျှောက် နေထိုင်နေမိ တာပါပဲ ။ ဒီမှာစကပ်တို ၊ကြိုးသိုင်း ဖိနပ် အကျီ င်္ အပါးလေးတွေ ၀တ်နေတိုင်း ဘ၀ မေ့တယ် လို့မတွေးမိပါဘူး ။ ဒီပတ်ဝန်းကျင် မှာဒီလိုပဲ နေကြတာကို ကျွှန်တော် တို့နိုင်ငံ မှာဒီလိုဝတ်စားပြီး လိုင်းကား တိုးစီး လို့ မှမ၇တာ ၊ ဒါကြောင့် အများစု မ၀တ်ကြတာ ။ တော်တော် ချမ်းသာတဲ လူနည်းစု လောက်ပဲ ဒီလို ၀တ်စား ကြတယ်လေ ။ သူတို့က ကိုယ်ပိုင်ကားတွေ နှင့် သွားလာနေနိုင်ကြတယ် ။ ဒီလို ပါပဲ ...ကျွှန်တော့် အမြင် .....မြန်မာ ကမြန်မာ ပါပဲ ......
Permalink Reply by yan yan on May 18, 2011 at 1:05pm Dae wer Hein is right. As long as it is lawful, there is no problem. We can appreciate those who are helping people. But we can't put on blame those who don't help people as well. What you are today is what you did in the past.
အခုကို မင်းကတော်တော်ဝင်ပါနေပြီ။ Daewer Hein said:
အမှန်ကတော့ လူတိုင်းက ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာမို့၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ဘ၀ ကိုယ်မေ့ချင်မေ့ထားပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်... တကယ်ခက်နေတာက ဘ၀မေ့တဲ့ ဗမာတွေမဟုတ်ပဲ သူမျာူကိစ္စ သိပ်ဝင်ပါချင်နေတဲ့ ကျန်တဲ့ဗမာတွေပါ... ကျနော်လဲ ဘ၀မေ့တာကို မကြိုက်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ဒါသူ့ဘ၀နဲ့ သူ့ကိစ္စပဲလေ... `ကိုယ်နှင့်မဆိုင်၊ ကိုယ်မပိုင်၊ ရောဝင်မပါရ´တဲ့...။